चितवनमा ट्राफिकको मनपरी, “उवासंघ अध्यक्ष गौतम भन्दछन् अव्यवहारीक शैली किन ? ” – Saurahaonline.com
चितवनमा ट्राफिकको मनपरी, “उवासंघ अध्यक्ष गौतम भन्दछन् अव्यवहारीक शैली किन ? ”
दिपक पौडेल (लागेका कुरा)
किन चितवनका व्यवसायीको ट्राफिक प्रति यति धेरै दुखेसो
चितवन, ०२ कात्र्तिक । सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुँदा चितवनको मुख्य बजार नारायणगढ बजारमा ट्राफिक जाम ठुलै समस्या बन्ने देखिदै गएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीमा सिमित जनशक्ति, प्रविधिको अभाव अनि त्यसमाथि सवारी चालकहरुबाट हुने नियम उल्लंघन, जसले चितवनमा दिनहुँजसो यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त बनाउँदै आएको छ ।
जथाभावी सडक छेउमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने र देख्नेलाई सामान्य नै लाग्दो हो । तर सडक छेउमा लापरवाहीपूर्वक गरिने पार्किङ नियमित यातायातमा अवरोध पुर्याउने एउटा प्रमुख कारण हो । त्यस्तै जथाभावी पार्किङको समस्या समाधानार्थ अपनाइएका विधि–प्रकिया प्रभावकारी नहुनु ट्राफिक प्रहरीको हैरानीको कारण हो ।
सडक वा निषेधित सार्वजनिक स्थानमा सवारीसाधन छाडेर घण्टौसम्म बेपत्ता भइदिनेका पछाडि लागिरहन वा कुरिरहन ट्राफिक प्रहरीलाई सम्भव हुँदैन । टीभीटी स्टीकरको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक असहजता छ । हो ट्राफिक प्रहरीको विभिन्न समस्याहरु छन् । तर ट्राफिक प्रहरी भएको भन्दै मनपरी गर्न अधिकार कसलाई पो हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा कतिपय ठाँउमा ट्राफिक प्रहरी नै चितवनमा मनपर्दी गर्दै हिडेको उवासंघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले आफ्नै फेसबुक बालमा पोष्ट हेरेपछि झन प्रष्ट बन्न सकिन्छ ।
कमिशन आउने नाम गल्ती सच्चाउने मौका पनि नदिन सिधै चिट काट्ने शैली अव्यवहारी न भए के उनी प्रशन् पनि गर्दछन् ।
चितवनको ट्राफिक प्रहरीको बारेमा जती चर्चा अहिले सुनिएको छ त्यस्तो कुनै वास्तविकता नरहेको यहाँका व्यापारी तथा जानकारहरु बताउछन् । हो अहिले आएका प्रहरी प्रमुख बसन्त कुबँर केही राम्रा प्रहरी मध्य गनिन्छन् तर उनकै नेतृत्वमा रहेको चितवनको ट्राफिक प्रहरी भने गुन्डागर्दी शैलीमा काम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजन भेटवालको नेतृत्वमा गरेको हरेक पटक गुनासो सुनिन्छ । यसमा केहि समय अगाडी उनी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवाल केही दिन अगाडी मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापन उत्कृष्ट भन्दै प्रहरी दिवसमा सम्मानित तथा पुरस्कृत भएको यहां स्थानियलाई दुःख दिन हो उवासंघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम बताउछन् । उनी भन्दछन् के क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ट्राफिक प्रहरीले गुण्डागर्दी शैली अपनाएको जानकारी दिए ।
चितवनका व्यवसायीहरुका अनुसार ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न छाडेर हिजोआज राजश्व विल चेकिङ्ग गर्ने, मुख्यराजमार्ग भन्दा भित्र सडकमा सामान्य ठाउँमा राखिएका सवारी कागजपत्र लिएर जाने र व्यवसायी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी सहायक निरीक्षक जयप्रकाश मण्डलको नेतृत्वमा दुख दिने गरेका छन् ।
यस पटक एक जना व्यापारीले बजारमा आफ्नो पसल अगाडी फुटपाथमा सामान राखेको विषयमा प्रहरीले ति व्यापारीलाई धम्काउनुका साथै कानुनमा सम्पुर्ण अधिकार आफ्नो भएको प्रहरीले बताए पछि लाचार भएर उनले गुनासो गरेका छन् ।
चितवनका ट्राफिक प्रहरी बजारमा कुनै सामान फुटपाथमा राखे त्यस सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार नगर प्रहरी हो । तर यहां ती सहायक निरीक्षक मेरै हो नि धम्काएको भिडियो पनि हेर्न सकिन्छ ।
अनि त्यो खोसेको सामान कहाँ लगेर कसरी राख्ने कहाँ कसरी जरिवाना तिरेर व्यापारीले आाफ्नो सामान लान सक्छन् त भन्ने बारे उनले व्यपारी केही भन्न पनि चाहेनन् । तर पनि यस विषयमा भने चितवनका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुवंरले ट्राफिक प्रहरीले नियम भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको दावी गरे ।
हाम्रो कुनै कानूनमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनको हावा खुस्काइदिने व्यवस्था छैन । नियमविपरित सवारी पार्किङ गरेको पाइए उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा सवारीसाधन लैजाने र जरिवाना गरेर छाड्ने प्रावधान छ । तर ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने नाममा मनपरी स्वनिर्मित कानून पनि सँगसँगै लगेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो यस्तो अधिकार ? एउटाले नियम मिच्यो भन्दैमा अर्कोले गैरकानूनीतवरले सजाय दिन कानूनी राज्यमा पक्कै मिल्दैन । कारवाही प्रक्रियामा अप्ठयारापन र त्रुटी छन् भने समयानुकुल सच्च्याउने हो, न कि आफै जान्ने हुने ।